Izindaba - Ukugunyazwa kwe-UL - I-BlackShields DC Powered Air conditioner iphumelele isitifiketi se-UL
IBlackShields iyajabula ukumemezela ukuthi amamodeli angu-2 e-DC powered Cabinet Air conditioner ehlelelwe ikhasimende lase-US eliphasise ukugunyazwa kwe-UL. Ngemva kokuhlolwa nokuhlolwa okuningi, I-Underwriters Laboratories isayine ukugunyazwa kwe-UL kumamodeli angu-2 we-DC air conditioner.
Siyaziqhenya ngokuthi i-Air conditioner enamandla e-DC ifakwe isethi yesilawuli okuhlanganisa isilawuli, umshayeli we-DC Compressor kanye nokuvikela umbani okuyi-R&D by BlackShields. Lokhu kusho ukuthi i-BlackShields ingahlinzeka ngezimo zomoya ze-DC ezihlukile ngokugunyazwa kwe-UL ngesicelo sekhasimende.
I-BlackShields ikhiqiza i-DC Air conditioner ye-DC esetshenziswa kakhulu kumasayithi we-Telecom ngaphandle kwegridi yamandla noma isebenzisa ukunikezwa kwamandla okuxubile.
I-air conditioner ye-DC ifakwe i-True DC powered compressor (ayikho inverter) kanye namafeni e-DC akwazi ukulungisa isivinini ngokusekelwe esicelweni sokupholisa kukhabhinethi. Ukunikezwa kwamandla kwe-DC powered cabinet Air conditioner kungu-48V okungasebenza ngokuqondile ngebhethri kumasayithi. I-DC compressor ingaqala kancane ukuze igweme i-inrush current ukulimaza ijeneretha.
I-BlackShields ihlinzeka nge-DC powered cabinet Air conditioner (amandla okupholisa ukusuka ku-300W ukuya ku-4000W) ukuze kusetshenziswe okuhlukile.
Sicela uxhumane nathi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Isikhathi sokuthumela: Jul-29-2021